Ụlọ ọrụ abrasives na-agbawa agbawa, ndị na-ebunye ihe - Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-agba ọkụ nke China
Igwe anaghị agba nchara Cut Waya Shota na-eme ya site n'ịbelata waya igwe anaghị agba nchara n'ime pellets.Enwere ike itinye ya n'ọkwa dị iche iche dị ka ndị ahịa si dị iche iche ojiji.
TAAobere carbon bainite ígwè ogbugbaakpọkwaraMgbanwe nke ígwè LCB.
Dị ka ndị na-eduga emeputa na fìeld nke metal abrasive, TAA Metal nọgidere na-emeziwanye ngwaahịa àgwà na ịzụlite ọhụrụ produ n'ime gara aga afọ.TAALCB mebiri abrasivebụ ngwaahịa na-arụ ọrụ dị elu mgbe nyocha na mmepe nke afọ iri gasịrị, nke bụ ngwakọta zuru oke nke teknụzụ petent TAA na teknụzụ ndị nwe ụlọ, dị ka mgbasa ozi na-agbawa agbawa chọrọ, TAA.LCB agwakọta abrasiveetinyere na atl ubi metụtara ogbugba ogbunigwe na aja aja.Ịrụ ọrụ nke ọma nke Jt nwere ike inyere ndị ọrụ aka ịchekwa 50% nke ọnụ ahịa ịgbawa agbawa ha.
Aluminom ịkpụ waya gbaraahakwa ya dikaAluminom shot, aluminum beads, aluminum granules, aluminum pellet.
Zinc ịkpụ waya gbaraahakwazinc shot, zinc pallet, zinc beads, zinc bee-waya gbawara.Ọ dị nro karịa igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, nkedo ma ọ bụ bee ngwaahịa waya.
Brown aluminum oxidena-ejikọta ya na crystallized n'okpuru okpomọkụ dị elu site na ngwakọta nke bauxite na ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ.A na-eji ya mara ya site na isi ike ya dị elu, ịdị mma dị mma na ọdịdị ya.
Ọla kọpa ịkpụ waya gbaraa na-emepụta site na ịkpụ site na waya ọla kọpa n'ime pellets, ogologo ya hà dayameta nke waya ahụ. a na-ejikarị eme ihe maka ọgwụgwọ elu.A na-akpọkwa ya dị kaọla kọpa ogbugba, ọla ịkpụ waya ogbugba, ọla kọpa gbara dị ka ịkpụ, ọla kọpa, ọla kọpa granulesetc. Enwere ike iji ma dị ka ịkpụ ma ọ bụ oyiri ogbugba shapes.